Midowga Yurub wuxuu ka hadlayaa dib u dhigida Brexit 3 bilood – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Midowga Yurub wuxuu ka hadlayaa dib u dhigida Brexit 3 bilood
Beegsonews- Raiisel wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa markale isku dayi doona Isniinta kale inuu ugu yeedho doorashada hore, laakiin fursadihiisu way yar yihiin.
Inta badan waddamada Yurub waxay u furan yihiin dib u dhigistii Brexit muddo seddex bilood ah, illaa Janaayo 31, 2020, waqti kama dambeys ah oo Johnson lagu qasbay inuu weydiiyo inkasta oo uu ku adkeystay inuu diiday, sida laga soo xigtay ilo reer Yurub ah.
Hoggaamiyeyaasha Midowga Yurub waa inay go’aamiyaan muddada dib u dhigistii saddexaad ee Brexit.
Safiirado ka kala socda 27 dal oo EU ah ayaa subaxaya isniinta si ay uga wada hadlaan mashruuc dib loogu dhigayo Brexit muddo seddex bilood ah, sida laga soo xigtay ilo reer Yurub ah.
Safiiradu waxay kulmayaan Isniinta, seddex maalmood kahor Oktoobar 31, oo ah taariikhda loo qorsheeyay Brexit.
Codbixinta Isniinta ee baarlamaanka Ingiriiska horraantii Disembar 12 doorashooyinka baarlamaanka ee uu soo jeediyay ra’iisul wasaaraha Khamiisti la soo dhaafay ayaa la rajeynayaa inuu jabiyo caqabadda.
Johnson, oo aan lahayn aqlabiyad baarlamaanka si uu u fuliyo ballanqaadkiisii ​​ahaa in la dhaqan geliyo Brexit Oktoobar 31, ayaa u baahan saddex-meelood laba meelood laba wakiilo si ay u qabtaan doorashooyinka hore sidaas darteedna ay taageerayaan qaar ka mid ah mucaaradka.
Previous articleHay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka oo shir uga furmay dalka Turkiga
Next articleBritain waxay isu diyaarineysaa inay Huawei siiso marinka shabakada 5G